Valentine's Day Retail uye eCommerce Buyer Kufungidzira kwe2021 | Martech Zone
Kana bhizinesi rako rekutengesa kana ecommerce ranga richinetseka kuburikidza nedenda uye kukiya, ungangoda kushanda imwe nguva yekuwedzera pane yako Valentine's Day Campaigns sezvazviri kuratidzika rino richava gore rekodhi rekushandisa - kunyangwe paine matambudziko ehupfumi! Zvichida kupedza nguva yakawanda tiri pamba nevatinoda kuri kuvesa mwoto werudo… kana kuti zvinoda kuti tigadzirise (kuseka).
Ongororo yeNational Retail Foundation inofungidzira vatengi kuronga kuronga kushandisa avhareji $ 196.31, kumusoro 21% pamusoro pegore rapfuurarekodhi yapfuura ye $ 161.96. Mari inotarisirwa kuita madhora mabhiriyoni makumi maviri nemanomwe, kukwira nezvikamu makumi matatu nezviviri kubva muzana regore rapfuura $ 27.4 bhiriyoni
Zuva reValentine Ecommerce Statistics
Maererano National Retail Foundation, Zuva reValentine harichisiri zuva rekuratidza kuonga kwako rudo rwemumwe wako. Vatengi vari kutenga zvipo zvevamwe vavo vanokosha, vana vavo, vadzidzisi vavo, vashandi pamwe navo… kunyangwe zvipfuyo zvavo! 15% yevaAmerica vanotombozvitengera chipo cheZuva raValentine.
Consumer Spending - vatengi vanoti vanozoshandisa avhareji $ 30.19 kunhengo dzemhuri kunze kwevakaroorana, kukwira zvishoma kubva pamadhora 29.87 gore rapfuura; $ 14.69 kushamwari, kubva pamadhora 9.78; $ 14.45 pavana vavanodzidza navo uye vadzidzisi, kubva pamadhora 8.63; $ 12.96 kune vashandi pamwe navo, kubva pamadhora 7.78; $ 12.21 pamhuka dzinovaraidza, kubva pamadhora 6.94, uye $ 10.60 kune vamwe, kubva pamadhora 5.72.
Zuva reValentine reZvipfuwo - 27% yevatengi vanoti vachatenga zvipo zveValentine zvezvipfuyo zvavo, nhamba yepamusoro munhoroondo yeongororo uye yakakwira kubva pa17 muzana muna 2010 pamadhora 1.7 bhiriyoni.
Kushandisa Nezera - Makore 18-24- Ronga kushandisa avhareji $ 109.31. Makore 25-34 anowanzove nemari yepamusoro uye vana votenga uye vanotarisira kushandisa $ 307.51. Makore makumi matatu neshanu kusvika makumi mana nemana ndivo vashandisi vashoma pa $ 35
Kushandisa neGender - Segore rega rega reongororo, varume vanoronga kushandisa mari inopfuura yevakadzi pa $ 291.15 zvichienzaniswa ne $ 106.22.
Wepamusoro Valentine Zuva Rekutenga Mapoka
Zuva Husiku - $ 4.3 bhiriyoni achashandiswa pahusiku hwakakosha kunze ne34% yevatori vechikamu veValentine's Day.
kendi - $ 2.4 bhiriyoni ichashandiswa ne52% yevatengi vanoronga kutora chikamu muZuva raValentine kupa zvipo - iine 22% ichironga kupa chokoreti.
chishongo - $ 5.8 bhiriyoni ichashandiswa ne21% yevanopemberera vanoronga kutora chikamu.
Flowers - $ 2.3 bhiriyoni ichashandiswa ne37% vanoronga kutora chikamu.
Gift Cards - $ 2 bhiriyoni ichashandiswa pamakadhi emakadhi gore rino.
Koni Kadhi - $ 1.3 bhiriyoni ichashandiswa pamakadhi ekukwazisa eValentine's Day.
Iwo epazasi mapoka anosanganisira maturusi, nhengo dzekurovedza muviri, zvekushandisa zvemitambo, midziyo yemukicheni, mhuka dzakapetwa… uye mixtapes (vanhu vachiri kuzviita ?!).
Ramba uchifunga kuti mari ichiri kuomarara kune vatengi vazhinji gore rino uye vazhinji vatori vechikamu muZuva raValentine-kupa zvipo kuchaitwa miniti yekupedzisira… saka tanga mishandirapamwe yako utange uye uichengete ichienda kusvika kuzuva raunogona kununura!
Isu takagovana imwe chinyorwa uye infographic nevamwe zuva rakakura reValentine Zvemagariro Makwikwi mazano!
Tags: kendichokoretimaitiro evatengiecommercechipo makadhimakadhi ekukwazisakuzivikanwachishongorudorudo ruri mumhepoRestaurantsretailersZuva reValentinevalentine zuva infographicValentine's Day mutengi kushandisaZuva reValentine zvipoZuva reValentine rekutengesa kushandisaZuva reValentine kunotenga